ရှီကျင့်ဖိန်က CPC နှင့် ကမ္ဘာ့ပါတီများထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားမည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ ထျန်အန်းမင်ရင်ပြင်၌ ဇူလိုင် ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရှီကျင့်ဖိန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇူလိုင် ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) နှင့် ကမ္ဘာ့ပါတီများ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် ပေကျင်းမြို့မှနေ၍ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတဆင့် ပါဝင် တက်ရောက်ကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ယင်းကိစ္စရပ်အား တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) ၏ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟူကျောက်မင် (Hu Zhaoming) က ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို “ ပြည်သူ့ဘဝသာယာလှပရေးသည် ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ တာဝန်ဖြစ်သည် ” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ကျော်မှ နိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့် ပါတီအကြီးအကဲ ၅၀၀ ကျော် တက်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ပါတီကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ လည်း ပါဝင် တက်ရောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပသော အခါသမယအတွင်း အလွန် အရေးပါသော နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်သော သံခင်းတမန်ခင်း ဆက်ဆံရေး အခမ်းအနား တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း ဟူ ကဆိုသည်။
အစည်းအဝေးတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား စီမံအုပ်ချုပ်ပုံအတွေ့အကြုံကောင်းများကို အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရန် နှင့် လေ့လာသင်ယူမှုတိုးမြင့်လုပ်ဆောင်သွားရန် ၊ ပါတီအချင်းချင်းလက်ချင်းတွဲ၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ နှင့် ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ကြိုတင်မမြင်နိုင်သော အပြောင်းအလဲများအတွက် စိန်ခေါ်မှုများ တုံ့ပြန်သွားရန် ၊ ပြည်သူများအတွက် စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ဖော်ဆောင်သွားရန် နှင့်တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုကို မြှင့်တင်သွားရန် ၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားထုတ်သွားရန် နှင့် လူသားမျိုးနွယ် ကံကြမ္မာအကျိုးတူ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးကို တွန်းအားပေးသွားရန် စသည့် ရည်ရွယ်များဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟူက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
BEIJING, July5(Xinhua) — The Communist Party of China (CPC) and World Political Parties Summit will be held Tuesday via video link. Xi Jinping, general secretary of the CPC Central Committee and Chinese president, will attend the summit in Beijing and deliverakeynote speech.
Hu Zhaoming, spokesperson for the International Department of the CPC Central Committee, made the announcement Monday.
The theme of the summit is “For the People’s Wellbeing: the Responsibility of Political Parties,” Hu said. More than 500 leaders of political parties and political organizations from 160-plus countries, and over 10,000 party representatives will attend the summit.
The summit is an important multilateral diplomatic event held atatime when the CPC marks its centenary, Hu said.
It aims to strengthen exchanges and mutual learning of experience in governance between the CPC and political parties worldwide, jointly respond to challenges brought by changes unseen inacentury and the global COVID-19 pandemic, enhance the philosophy and capability of seeking happiness for the people, advance world peace and development, and promote the construction ofacommunity withashared future for humanity, said Hu. Enditem
Xi made the remarks ataceremony marking the centenary of the CPC held in Beijing on July 1.
တရုတ်နိုင်ငံက မိုးလေဝသဂြိုဟ်တုသစ် လွှတ်တင်
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် လျှပ်စစ် ဗန်ကားကြီးများ ပထမသုတ် အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ ရောင်းချခဲ့ရ